Maamulaha Waxsoosaarka - Tianjin Panda Technology Group Co., Ltd
1 . Cusboonaysiinta sheyga. Isku-darka istiraatiijiyadda khadka istiraatiijiyadda shirkadda ee shirkadda, natiijooyinka cilmi baarista suuqyada iyo shuruudaha macaamiisha, qaabaynta tilmaamaha horumarinta badeecada, muujinta suuragalnimada alaabada cusub iyo abaabulidda hirgelinta;
2 . Hal-abuurka farsamada. Aruuriyaan oo abaabulo macluumaadka farsamada ee horumarinta alaabooyinka la midka ah ee guriga iyo dibedda si joogto ah, oo u dalbo shaqada wax ku oolka ah. Joogtaynta dareenka badeecada iyo teknolojiyada cusub ee guriga iyo dibadaba, oo isbarbar dhig xaalada dhabta ah ee shirkadda si si firfircoon u hal-abuurnimo;
3 . Hagaajinta tayada. Abaabulaan aqoonsiga iyo dib u eegista guulaha R & D, waqti go'an ku falanqee oo soo koobi khibrada iyo casharada ku jira hanaanka R&D, si joogto ahna u wanaajiyo tayada R&D.
Waxaan leenahay shaqeynta fosfooraska warshad, ma lahan daaweynta fosfoolka xarka.
Tillaabooyinka daaweynta-phosphation-ka-bilaashka ah:
Kaydinta Varnish + Sticker Workshop
LIISKA TILMAAMAHA VARNISH
Saddex buufiya sedex geeddi oo dubista, si gaarigu u rinjiyeeyo mid adag, labis, dhalaalaya
Warshaddeenu UMA adeegsato heerka filimka, midabku waa qurux badan yahay, wuxuu ku qarxaa qorraxda, sanadka kama baxo.
Ma jiro talaabooyin ku dhegan filimka Wax soosaarka: gal foornada heerkul hooseeya 80 ℃ si loo karinayo, loo sameeyo filim, dilaaco, ka dib gala foornada 150 ℃ si mar kale loo dubto, foornada si dabiici ah loo qaboojiyo.
Warshadheena gaarka u ah aqoon isweydaarsiga, aqoon isweydaarsiga rinjiga, labo xariiq gole, xakamayn tayo leh iyo waaxyo kale, iskaashi labada dhinac ah, wax soo saar heer sare ah.
Xakameynta Nidaamka Wax Soo Saarka:
Soosaar heerka SOP
No.1 Heerka Sera ee Derailleur SOP: Dammaanadda ugu weyn iyo gudbinta waxay ku xiran tahay qayb kasta oo adeegsiga dabacsanaan ah, aan kala go 'lahayn, oo loogu talagalay baaskiilku inuu bixiyo awood kaamil ah.
No.2 Jaangooyaha 'Front Fork' iyo Frame's SOP's: Joogga hore, Stem iyo Frame ha ku ciyaaraan xiriirka ka horreeya, hubinta dabacsanaanta isteerinka, iska ilaali waxyeelada rinjiga
Balance Bike , Fatxi Mountain Bike , Biin Bike Ka socda Shiinaha , Mountain Bike , Birta kulul ee Birta , Baaskiil Mountain Bike ,